तपाईको मोबाइल तातेर हैरान हुनुहुन्छ अब यसो गर्नुहोस् । « हाम्रो ईकोनोमी
तपाईको मोबाइल तातेर हैरान हुनुहुन्छ अब यसो गर्नुहोस् ।
दिनप्रतिदिन भित्रिने अत्याधुनिक प्रविधिले स्मार्टफोन पातलिँदै छ भने डाटा प्रोसेसिङ क्षमता बढिरहेको छ । यस्तै स्क्रिन रेजोल्युशन र दृश्यको गुणस्तरसमेत उत्कृष्ट हुँदै गएको छ । प्रयोगकर्ताको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्दा प्रोशेसरमा अत्यधिक चाप पर्दा फोन तात्ने समस्या पैदा हुन्छ । साथै, भिडियो र मोबाइल इण्टरनेटका कारण पनि फोन तात्ने गर्छ । झन् एण्ड्रोइड प्रयोगकर्तामाझ यो समस्या कुनै नौलो कुरै होइन । तर, यसरी फोन किन तात्छ भन्ने जान्नु आवश्यक छ । फोन तात्ने समस्याका प्रमुख कारण यस्ता छन् :
१. लामो समयसम्म निरन्तर फोनको प्रयोग गर्दा यसको प्रोशेसरमा भार पर्ने भएकाले फोन तात्छ ।
२. स्मार्टफोन चार्जमा राख्दा विद्युतीय सञ्चारका कारण पनि फोन तात्छ ।
३. वायरलेस फोन सञ्चालनका लागि रेडियो सिग्नलको आवश्यकता पर्छ । रेडियो सिग्नलका लागि विशेष प्रणालीको ब्यवस्था गरिएका हुन्छन् । यो प्रणाली कमजोर भएमा कनेक्टिभिटीका लागि ब्याट्रीमा चाप पर्छ । यो पनि फोन तात्नुको एक प्रमुख कारण हो ।
साधारण रूपमा फोन तात्नु सामान्य हो । तर, अत्यधिक मात्रामा फोन तात्छ भने तापले स्मार्टफोनलाई नराम्रो असर पुर्‍याइरहेको हुन्छ । यसो भइरहेको छ भने फोनलाई सकेसम्म खल्तीमा गुम्साएर नराख्नु राम्रो मानिन्छ ।
सधैं तातेमा परीक्षण गराउनुहोस्
स्मार्टफोनलाई चार्जिङका लागि राख्दा धेरै तातेमा केही समयका लागि फोनको चार्जिङ बन्द गरिदिनु राम्रो हुन्छ । तर, कमजोर कनेक्टिभिटीका कारण फोन तातेमा भने यसको कुनै समाधान नभएको विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
तथापि, केही समय फोन बन्द गरेमा केही मात्रामा यो समस्या कम हुन्छ । यदि फोन हरेक समय तातो भइरहन्छ भने फोन निर्माता कम्पनी वा विक्रेतासम्म पुगी परीक्षण गराउनुपर्छ । यसो गर्दा फोनमा केही अन्य खराबी भएमा त्यो पनि जान्न सकिन्छ । यस्तो समस्याको समयमै समाधान गर्नु आवश्यक छ । किनभने यस्तो परिस्थितिमा उपकरणमा खराबी आउनुका साथै जीउधनको समेत असुरक्षा हुन सक्छ ।